လုပ်ငန်း နှင့် အရောင် | မာသင်
ဖေ့ဘုတ် ရဲ့အရောင် က မိုးပြာရောင် စွန်းစွန်း
ကိုကာကိုလာ ရဲ့အရောင်က အနီရောင် စွန်းစွန်း
Amazon ရဲ့အရောင် က လိမ္မော်ရောင် စွန်းစွန်း
Best Buy ရဲ့အရောင် က အဝါရောင် စွန်းစွန်း
Starbuck ရဲ့အရောင်က အစိမ်းရောင် စွန်းစွန်း
Oral B ရဲ့ အရောင် က အပြာရောင် စွန်းစွန်း
Fedex ရဲ့ အရောင်က မရမ်းရောင် စွန်းစွန်း
Victoria’s secret ရဲ့အရောင်က ပန်းနုရောင် စွန်းစွန်း
Gucci ရဲ့အရောင် က အမည်းရောင် စွန်းစွန်း
လုပ်ငန်း တိုင်းမှာ အမည် ( နာမည်) ရှိသလို
Brand တိုင်း မှာ အရောင် ရှိတယ်။
ကိုယ့် လုပ်ငန်း က Brand တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည် လို ရင်
နာမည် တစ်ခု တည်းရှိယုံနဲ့မရဘူး ။
ကိုယ်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရောင်ကို ရွေးတတ်ဖို့လိုတယ်။
ကိုယ့် လုပ်ငန်း ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရောင် ကို ရွေးတတ်ဖို့လိုတယ်။
လုပ်ငန်း တစ်ခု မှာ …….
အမည်( နာမည် ) ရွေး တာ အရေးကြီးတယ် ဆိုရင် …
အရောင်… . ရွေး တာ လဲ အရေးကြီးတာပါပဲ။
အမည် နဲ့ အရောင် ကို သေချာရွေး ပါ။